डेरा अगाडि विभत्स अवस्थामा फेला पर्‍यो रिनाको शव(भिडियो सहित) - VOICE OF NEPAL
डेरा अगाडि विभत्स अवस्थामा फेला पर्‍यो रिनाको शव(भिडियो सहित)
७ बैशाख २०७६, शनिबार ०४:१६ 296 ??? ???????
मोरङको पथरीशनिश्चरे १ की २९ बर्षिया रिना बस्नेतको शुक्रबार राति भएको हत्यामा पथरी प्रहरी समेत दोषी देखिएको छ ।
पथरीमा आयोजित कन्सर्टलाई मध्यरात सम्म सञ्चालन हुन् दिनु पनि हत्याको प्रमुख कारण भएको स्थानीय बताउँछन । प्रशासनले कुनैपनि कार्यक्रम गर्न बेलुका ७ देखि ८ बजेसम्म मात्र समय दिने भएपनि सो कन्सर्टका लागी पथरी प्रहरीले मध्यरात सम्म सञ्चालन गर्न दिएको थियो ।
मृतकका छोराका अनुसार शुक्रबार दिउँसो आमा पुरै तनाबमा थिईन । उनको मोबाईलमा बारम्बार फोन आईरहेको थियो । उनी निक्कै हतास थिईन । दिउँसो एक आफन्तको जन्मदिनमा सहभागी भएर आएका आमाछोरा बेलुका कन्सर्टमा जाने तयारीमा भएपनि आमा पुरै तनावमा देखिएको र आत्तिएको जस्तो लागेको उनका छोराले बताएका छन ।
निरिह पथरी प्रहरी
केही महिना यता बारम्बार पथरीमा घटनाहरु भईरहेका छन । पथरी प्रहरी यस बिषयमा निकम्मा बनेको स्थानीयको आरोप छ । महिनादिनअघि सिक्का बारमा भएको हत्या,जंगलमा भेटिएको शव लगायतका आधा दर्जन बढी घटनामा प्रहरी निकम्मा देखिएको छ । कुनेपनि घटनाको अनुसन्धान गर्न र दोषी पक्राउ गर्न नसकेको पथरी प्रहरीप्रति स्थानीयले समेत औँला उठाएका छन ।